အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော, အကျိုးရှိစွာ, စည်းစိမ်ကြီသော, နှင့်ပျံသန်းဖို့အဆင်ပြေလမ်းပုဂ္ဂလိကပျံသန်းဖွငျ့ဖွစျသညျ. ဒါဟာမှရလဒ်များ 20% ပိုပြီးကုန်ထုတ်စွမ်းအား. သို့သော်ငြားလည်း, ပျံသန်းစီးပွားဖြစ်ဆောင်မှ 40% ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် drop.
အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားအတူသင်တို့အကြောင်းကြောင့်အချိန်ကိုကယ်တင်, သင့်ရဲ့ဂျက်လေယာဉ်အဆုံးမဲ့ဗျူရိုကရေစီရှိသည်သောအဓိကလေဆိပ်ကနေချွတ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး. တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အသေးစားလေဆိပ်ကနေထွက်သွားနိုင်ပါတယ်. မြားစှာသောသေးငယ်တဲ့ကြီးမားတဲ့လေဆိပ်ထက်ရှိပါတယ်.
အဓိကလေဆိပ်ကနေတစ်ဦးတည်းသာငါးခုတွင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်မြေများနှင့်ဌာန. နည်းနည်းယာဉ်အသွားအလာနှင့်အတူလေဆိပ်ထက်ပိုမိုကိုင်တွယ် 50% ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏. 30% ဤသူဂျက်လေယာဉ်၏အလယ်တန်းလေဆိပ်ကနေထွက်သွား.
သင်က Want တဲ့အခါမှာပျံသန်း
စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူ, သင်တစ်ဦးလေကြောင်းလိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်အချိန်ဇယားကို adjust. အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားနှင့်အတူ, ထိုသို့အခြားလမ်းပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါသည်.
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏အတွင်းပိုင်းအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်. သူတို့ကသငျသညျမွငျကွပွီဘာမှမတူဘဲများမှာ. တချို့ကဂျက်လေယာဉ်ရွှေငွေနှင့်အလှဆင်အတွင်းပိုင်းရှိ. သင်နှင့်အတူချထားတဲ့ faucet လက်ကိုင်နှင့်အတူဂျက်လေယာဉ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် 24 ကာရက်ရွှေကို. ဤသူဂျက်လေယာဉ်၏အခြားအေးမြဆက်စပ်ပစ္စည်းရွှေအနစ်အင်တုံပါဝင်, ထိုင်ခုံကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးခလုတ်များနှင့်မြင့်မားဇိမ်ခံဘေးကင်းလုံခြုံရေးခါးပတ်ဟာ့ဒ်ဝဲ.
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Cream ပုဂ္ဂလိကယင်ကောင်
ဒီ Bill Gates ကလည်းပါဝင်သည်, ဂျွန်ထရာဗိုလ်, Oprah Winfrey, ဂျက်ကီချန်း, နဲ့ Tom Cruise နဲ့. ဂျွန်ထရာဗိုလ်တစ်ဦးဘိုးအင်းအပါအဝင်တကျိပ်တပါးသောပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင် 707. Jay-Z တစ် Bombardier Challenger ကိုပိုင်ဆိုင် 850 နှင့်, Tom Cruise နဲ့တစ်ဦး Gulfstream IV ကိုပိုင်ဆိုင်. Google ထံမှထိပ်တန်းကော်ပိုရိတ်အမှုဆောင်အရာရှိ, Microsoft က, Coca-cola, နှင့်အခြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီတွေပုဂ္ဂလိကပျံသန်း. အသေးစားနှင့်လယ်ပိုင်းအရွယ်ကုမ္ပဏီတွေပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အသုံးပြုမှု၏ကောင်းတစ်ဦးရာခိုင်နှုန်းတက်ပါစေ. high-level ကိုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုအသုံးပြုနေ. နည်းပညာဆိုင်ရာ, ရောင်းအား, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပညာရှင်များလည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဤ mode ကိုအသုံးပြု.